ထိုင်းဟိုတယ်များ- အမျိုးသားများ ကြီးစိုးသည့်နေရာ | ထိုင်း
တည်နေရာ: ပင်မစာမျက်နှာ » Post » နိုင်ငံ | တိုင်းဒေသကြီး » ထုိင္းႏုိင္ငံ » ထိုင်းဟိုတယ်များ- အမျိုးသားများ GM ရှုခင်းကို လွှမ်းမိုးသည့်နေရာ
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ • သတင်း • ထုိင္းႏုိင္ငံ • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ
ထိုင်းဟိုတယ်များ- အမျိုးသားများ GM ရှုခင်းကို လွှမ်းမိုးသည့်နေရာ
Phuket Hotels Association ၏ ဓါတ်ပုံအား လေးစားစွာဖြင့်
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ်များတွင် အထွေထွေမန်နေဂျာများ၏ 90% သည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အမျိုးသမီးအမှုဆောင်များ ပြည့်နှက်နေသည့်ကြားမှ အမျိုးသားများဖြစ်ကြကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ခုက ဖော်ပြသည်။ ထိုင်းဟိုတယ်များအတွက် ကျားမတန်းတူညီမျှမှုမြင့်မားသော အလုပ်အကိုင်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ တန်းတူညီမျှမှုမြင့်မားသော အမျိုးသမီးများ အဘယ်ကြောင့် အတားအဆီးများ ကြုံတွေ့နေရသည်ကို နားလည်စေရန်အတွက် ဖူးခက်တွင် အရေးကြီးသော ဧည့်ဝတ်ပြုပွဲတစ်ခု။
Dusit Thani Laguna Phuket တွင် ကျင်းပသည့် “Mind The Gap” သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီး ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ် ၁၀၀ ကျော်ကို စုစည်းခဲ့သည်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းစုအများစုသည် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုနှင့် မတူကွဲပြားမှုကိုသေချာစေရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်သောမူဝါဒများရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဧည့်ဝတ်ပြုမှုလုပ်သားအင်အား၏ 100% ကျော်ရှိသည်ဟု အစီရင်ခံထားသော်လည်း၊ C53 Hotelworks မှ မကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ အထွေထွေမန်နေဂျာများ၏ 9% သည် ထိုင်းဟိုတယ်တွေက အမျိုးသားတွေပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် တစ်နေရာ၌ အမျိုးသမီးများသည် မှန်မျက်နှာကျက်ကို ရိုက်ခတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါက ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် သီးသန့်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ကျားမတန်းတူညီမျှရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာမှာ ပိုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံလို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ယူဆကြပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းရှိ Fortune 25 ကုမ္ပဏီများ၏ လေးပုံတစ်ပုံ (၂၅%) သည် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ 500% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခေါင်းဆောင်ရာထူးများတွင် အမျိုးသမီးများရှိသည်။
ဒါပေမယ့် 21 ရာစုမှာ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေက ဟိုတယ်ကဏ္ဍမှာ မညီမညွတ်ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ အမျိုးသမီး အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ အလားအလာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကုမဏီတွေက ဘယ်လိုအဆင့်တွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ။ မိသားစုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကို ဟန်ချက်ညီစေရန် အမျိုးသမီးများအတွက် မှန်ကန်သော ပံ့ပိုးမှုပုံစံများ ရှိပါသလား။ ထို့ထက်ပို၍ စိုးရိမ်စရာကောင်းသည်မှာ၊ အားကောင်းမောင်းသန် အမျိုးသမီးများကို “တွန်းအားပေး” သို့မဟုတ် “ရည်မှန်းချက်ကြီးလွန်းသူ” အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည့် ရှေးခေတ်ဆန်သော မလိုမုန်းထားမှုများကြောင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းသည် လွှမ်းမိုးနေဆဲပင်လား။
အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ် ၁၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
Mind The Gap သည် သမားရိုးကျတွေးခေါ်မှုကို စိန်ခေါ်ပြီး အလုပ်ရနိုင်သောအဖြေများဖန်တီးရန် ကြိုးပမ်းသည့် ဆက်တိုက်ဆွေးနွေးမှုများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် အဆိုပါအရေးကြီးမေးခွန်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ တက်ရောက်သူများတွင် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့် ဟိုတယ် GM များအပါအဝင် လုပ်ငန်း၏အထင်ရှားဆုံး အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်အချို့ ပါဝင်ပြီး အများစုမှာ ၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၎င်းတို့သည် လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ လိင်မှုဆိုင်ရာ လစာကွာဟမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစသည့် ပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်စွာ အလေးထားသော ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်သည့် ကျောင်းသားများနှင့် ဘွဲ့ရများ ပါ၀င်သည်။
အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍများဆီသို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်သည့်လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် အရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းညွှန်မှုနှင့် ပညာရေး၏တန်ဖိုး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုခချမ်းသာကို ထိန်းသိမ်းနည်းနှင့် အပြုသဘောဆောင်သော အလုပ်-ဘဝ ဟန်ချက်ညီမှုတို့ ရရှိရေးတို့ ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါနေ့တစ်ဝက်ပွဲကို C9 Hotelworks ၏တည်ထောင်သူနှင့် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Bill Barnett မှ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Sumi Soorian မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဖူးခက်ဟိုတယ်များ အသင်း။
“၂၁ ရာစုမှာ ဒီအကြောင်းအရာကို ပြောနေသေးတာ ရှက်စရာပါ။”
Phuket Hotels Association ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Sumi Soorian က “ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှုဟာ ယနေ့ကမ္ဘာမှာ လုံးဝမရှိသင့်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အောင်မြင်သော ကမ္ဘာ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌများနှင့် ဒါရိုက်တာများ၊ ပရဟိတသမားများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် အခြားအရာများစွာရှိသည်။ အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သက်သေပြဖို့ မလိုတော့ဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ဆယ်ခုတွင် အထွေထွေမန်နေဂျာ ကိုးဦးသည် အမျိုးသားများ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? 'Mind The Gap' ကို လက်ခံကျင်းပခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျားမရေးရာ အစီအစဉ်ကို တွန်းအားပေးရန်၊ ခက်ခဲသောမေးခွန်းများမေးကာ ကုမ္ပဏီများကို သတိပြုမိစေရန် တွန်းအားပေးလိုပါသည်။ ယနေ့ခေတ်လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်လာသည့် အမျိုးသမီးငယ်များသည် ခွန်အားနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုခံစားရရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အပြစ်ကင်းသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ခံစားနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီနေ့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပြဿနာတွေ ပြေလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ကိုယ်စားလှယ်အများအပြားသည် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည့် အမျိုးသမီးငယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အကြံဉာဏ်များကို မျှဝေရန် အခွင့်အရေးကို ရယူခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် သူမ၏ လမ်းညွှန်မှုအစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သော Pamela Ong က တက်ရောက်သူများအား "အဆိုးမြင်မှုများမှ ဝေးဝေးနေရန်နှင့် ရွယ်တူ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကွန်ရက်ကောင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်သင် ဝန်းရံထားရန်" အကြံပြုထားသော်လည်း Sornchat Krainara မှ ကိုယ်စားလှယ်များအား "ကျယ်လောင်စွာ မပြောပါနှင့်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လျှော့တွက်ပါ။" Cornell University ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာများပရိုဂရမ်မှ ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့သော Isara Pangchen သည် အမျိုးသမီးများအား "သင်ယူရန်၊ လေ့လာရန်နှင့် တိုးတက်ရန် အခွင့်အရေးကို အမြဲယူပါ" ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
အကြီးတန်း ဧည့်ဝတ်ပြုခေါင်းဆောင်များ၊ ဘွဲ့ရများနှင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ စုပေါင်းပြီး Mind The Gap မှ တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ ဖူးခက်ဟိုတယ်များအသင်း C9 Hotelworks၊ Delivering Asia Communications နှင့် Dusit Thani Laguna Phuket တို့ ပူးပေါင်း၍
Phuket အကြောင်း နောက်ထပ် သတင်းများ
၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ အမြိုးသမီးမြား | ထိုင်းဟိုတယ်များ | ထုိင္းႏုိင္ငံ | ဟိုတယ်များ | အာရှတိုက်
Blossom Hotel Houston သည် 2022 ခုနှစ်အတွက် US ရှိ TripAdvisor ၏ အကျော်ကြားဆုံးဟိုတယ်အသစ်ဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်များ|
မိသားစုအပန်းဖြေခရီးအတွက် ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးနေရာ ၁၀ ခု ထုိင္းႏုိင္ငံ|
ခရီးသွားနှင့် ခရီးသွားလာရေးတွင် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ဂုဏ်ပြုခြင်း။ အမြိုးသမီးမြား|
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆေးခြောက်ကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော်လည်း အနံ့ကိုမုန်းသည်။ ထုိင္းႏုိင္ငံ|
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရုရှားခရီးသွားလုပ်ငန်း- 10,000 တွင် 2021 သည် 435,000 တွင် 2022 သို့ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထုိင္းႏုိင္ငံ|
အာရှတိုက် ဟိုတယ်များ ထုိင္းႏုိင္ငံ ထိုင်းဟိုတယ်များ အမြိုးသမီးမြား
အဲဘတ်စ် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး၊ Artificial Intelligence နှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ ခြေချသည်။
နယ်သာလန်သည် Environmental Protection အတွက် စိန့် Eustatius တွင် ဧရာမခြေလှမ်းကို တက်လှမ်းခဲ့သည်။
သီးသန့်အင်တာဗျူး- Aerolineas အာဂျင်တီးနားနှင့်...
Sandals Foundation သည် Caribbean လူငယ်များအား ခွန်အားဖြစ်စေသည်...
Yukon Joins UNWTO စဉ်ဆက်မပြတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ရက်...
ရုရှား Aeroflot သည် SkyTeam လေကြောင်းလိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။
SITE NITE Europe အစောပိုင်းငှက်စျေးနှုန်းများ မကြာမီ ကုန်ဆုံးပါမည်။
New Zealand မှ Mövenpick ဟိုတယ်အမှတ်တံဆိပ်
Carnival Luminosa သည် Carnival Cruise Line သို့လွှဲပြောင်းရန်...
အီရန်နိုင်ငံမှ ဥရောပဧည့်သည်နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရ...
Bahamas ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ထိပ်တန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံ...
Sordevolo ၏ စိတ်အားထက်သန်မှုက အောင်ပွဲပြန်လည်ရရှိစေသည်...
Boeing မှ ကာကွယ်ရေး၊ အာကာသနှင့်...
ဟိုင်တန်ပင်လယ်အော်၊ Sanya တွင် ကြယ်လေးပွင့်/အကြံပြုထားသော ဟိုတယ် 1 ခု...
Saint Martin ခရီးသွားလုပ်ငန်းရုံးမှ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ မစ်ရှင်ကို ဆောင်ရွက်...
Sandals ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ကျောင်းများကို ရေကောင်းရေသန့်ဖြင့် ကူညီပေးသည်...
အိန္ဒိယ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များသည် ခရီးသွားလာရေး ပြန်လည်ရှင်သန်မှုအတွက် အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲထားသည်။
ခရီးသွားရင် Hack ခံရနိုင်တယ်။
Blossom Hotel Houston သည် Stay Longer Package ကို တင်ဆက်သည်။
Sunny နေ့များအတွက် ခရီးသွားများသည် အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားများပေးဆောင်သည့်နေရာ
ဖီးနစ်နှင့် Portland သို့ Frankfurt မှ Condor အသစ်
New Fort Lauderdale မှ Norse Atlantic လေယာဉ်ဖြင့် Oslo သို့...
Napa Valley ၏အကြီးဆုံးခရီးဆုံးအပန်းဖြေစခန်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသော...
Four Seasons Hotel Westlake ရွာ ကျန်းမာရေးအတွက်...
Airbus A321XLR ဂျက်လေယာဉ်သစ်သည် ပထမဆုံးအကြိမ် ဆင်းသက်သည်။
Brilliant Hotel Man သည် Chicago တွင် Palmer House ဆောက်...
Global Bucket Loader လုပ်ငန်း စျေးကွက် ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့်...